GINGER INTA LAGU GUDA JIRO UURKA: SHAAHA LEH LIIN IYO MALAB FOR HARGAB IYO LALLABO - MIYAAD CABI KARTAA AMA MAYA, MA CUNI KARTAA AMA MA AHAYN XIDIDKA MARXALADAHA HORE EE 1, INTA LAGU JIRO 2 IYO 3 TRIMESTER? - BEER CAGAARAN
Ma cuni karaa sinjiga muddada uurka? Raashinka waxtar leh ee shaaha leh xididka.
Waqtiga uurka, hooyada mustaqbalku waa mid aad muhiim u ah in ay ku sugnaado caafimaad qabta, ma ahan inay qaboojiso hargabka iyo fayraska. Diyaargarowga daawada waa mid aan loo baahnayn waqtigaan, sidaas darteed dhirta daawada waxay u timaadaa gargaarka, mid ka mid ah xididgiisa. Miyuu faa'iido u leeyahay xilliga uurka, sida loo isticmaalo si haboon iyo goorta ay ka wanaagsan tahay inaad si buuxda u bixiso bahalkaas?
Haddii ay suurtagal tahay in haweenka uurka leh ay cabbaan shaashadda faleebada leh sida liinta iyo malab, tusaale ahaan, qabow ama xasilooni, iyo sidoo kale haddii ay u qalanto in la isticmaalo xidid qashin ah lalabada - tixgeli xiga.
Haweenay uur leh ma cunaan rooti xidid ama ma, maxaa sabab u ah?
Si aan si siman uga jawaabin su'aasha ah in qof sinaan ah uu faa'iido u leeyahay haweenka uurka leh waa wax aan macquul ahayn. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ginger, inkasta oo ay ku badan tahay nafaqooyinka, ay ka horjeeda. Waxaa la rumeysan yahay in Qaar ka mid ah suuqyada dhirta ayaa si xun u saameeya jidhka hooyada uurka leh. Waxaa jira aragti ah in marka la isticmaalo galmada ay jirto korodhka codka ilmo-galeenka, taas oo u keeni karta ilmaha caloosha. Isla markiiba waa in la ogaadaa - tani waa uun malaha, laakiin waxa fiican inaadan qatar gelin haddii qof dumar ah uu leeyahay siyaabo qallafsan.
Waxaan ku talineynaa inaan ka ogaano fiidiyowga haddii la isticmaali karo sinjibiil inta lagu jiro uurka:
Waxyaabaha kiimikada ee alaabada
Warshadani waxay ka sarreysaa dhamaanba qaybta sare ee maaddooyinka waxtarka leh, sidaa darteedna waa mid aad u qadarin leh labada kariska iyo daawada labadaba. Geeska waxaa ku jira:
Macdanta (magnesium, fosfooraska, kalsiyum, birta, sodium, zinc, potassium, chromium, manganese, silicon;
fitamiino (A, B1, B2, B3, C, E, K);
asiidh dufanka leh (oleic, linoleic, caprylic);
Gingerol waa walax khaas ah oo siinaya dhadhan tartiib tartiib ah wuxuuna siinayaa sifooyin ka hortag ah antiinflammatory.
Ma aha wax la yaab leh in la gangadeysto sida noocyo badan oo faa'iido leh. Si kastaba ha ahaatee Dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan haweenka uurka leh inay taxaddaraan asalka mucjisadan.. Nadaafad gaar ah waxay u baahan tahay in lagu muujiyo qofka ugu horeeyay ee la seexdo, sababtoo ah waxaa jira fursado ah in uu yeesho xasaasiyad, iyo haddii hooyada uurka leh aysan isku dayin daawadan ka hor intaan la qaadin, ka dibna laguma qiimeynayo.
Noocyada codsiga asaasiga waqtigan, oo ay ku jiraan marxaladaha hore
1-da bilood ee ugu horeeya
Saddexda bilood ee ugu horreeya ee uurka, sinjibiintu waxay ka caawisaa sidii loo cirib tiri lahaa astaamaha sunta hore. Wax kasta oo ur ah iyo dhadhankiisu waxay u keeni karaan lallabbo iyo nacayb ah haween uur leh, oo inta badan keenta daal. Dareemidda gubashada iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee sinjigu wuxuu sheyga siinayaa awooda lagu xakameynayo dhiirigelinta qulqulka.
Intaa waxaa dheer, muddadan xiliga koritaanka hormoonku wuxuu ku dhacaa jirka dumarka, taas oo keeneysa hoos u dhigga difaaca jirka iyo kororka khatarta hargabka ama ARVVI, taas oo ah, tanina, waa mid halis u ah horumarinta uurjiifka. Bactericidal, anti-bararka iyo suuqyada soojireenka ee sinjiga ayaa ka caawin doona haweenka uurka leh inay ka fogaadaan cudurka ama u guurto iyada oo aan dhib lahayn.
Dukaamadani waxay sidoo kale ka qaybqaadaneysaa buuxinta fitamiinada oo ay ku nastaan ​​haweenka uurka leh.
Saddexda bilood ee labaad, sunta sunta, sida caadiga ah, dib u gurashada, iyo rabitaanka cuntada ayaa badalaya. Maaddaama uurjiifku si firfircoon u korayo, waxay u baahan tahay macdano dheellitir ah, borotiinka, kharashka tamarta, caafimaad qabta, nafaqo fara badan oo hooyada mustaqbalka ah ayaa horay u socota. Badanaa inta lagu jiro mudadaas dumarka waxaa jiri kara bir ah birta jirka. Marka lagu daro cuntooyinka birta ku jira, oo ay ka mid yihiin xididada faleebada, cuntadaada, waxaad kordhin kartaa heerarka hemoglobin iyada oo aan la isticmaalin daroogooyinka.
Sidoo kale marxaladda labaad, hooyooyinka uurka leh waxay inta badan qabaan dhibaatooyin maqaarka ku salaysan asalka hoormoonka. Isticmaalka maaskarada oo lagu daro xididada galmada waxay ka caawisaa in ay caadi u noqoto qanjirada qanjirada oo ka takhalusaan dhibaatada.
Saddexda bilood ee saddexaad, ilmuhu wuxuu noqonayaa cabir weyn, oo aan saameyn karin shaqada hawsha gudaha ee haweeneyda. Dhibaatooyinka mindhicirrada, oo ay uur-qabeen uur-jiifka, joojiyaan shaqaynta xoog buuxda, taas oo ka muuqata xadgudubka xoojinta mindhicirka, caloosha, iyo wax soo saarka gaaska oo kordhay. Cuncinta cuncunku waxay ka caawisaa sidii ay u ilaalin lahayd shaqada caadiga ah ee nidaamka dheef-shiidka, waxay ka hortagtaa horumarinta dysbiosis iyo caadada saxarada haweeneyda uurka leh.
Cuncunku wuxuu kaloo kaa caawin karaa in uu yareeyo muruqyada lugaha wuxuuna ka caawiyaa ka hortagga mustaqbalka hooyada xuubka ah ee uur-ku-jirka sababtoo ah tallaabada dhiigga-yar-yar.
Waa muhiim! Haddii haween uur leh lagu ogaado cudurka preeclampsia (latex toxicosis), laguma talinayo in la cuno asal raashin.
Ma jiraan wax khatar ah oo ka imanaya isticmaalka ama ma'aha, iyo maxaa?
Maadaama bacadku uu yahay alaab aad u firfircoon oo leh hanti la aqoonsan yahay, waxay leedahay tiro fara badan. Sidaa darteed, waxaa loo isticmaali karaa oo keliya muddo cayiman iyo xaalado gaar ah. Xaaladaha soo socda, gingerfishku guud ahaan waa ka hortag dumarka uurka leh:
In cudurada mareenka dheef-shiid kiimikaad (boogta, gumaacad inta lagu jiro muddooyinka sii xumaan). Waa in la ogaadaa in sinjibiinta la kariyay ay xitaa waxtar u leedahay maaddaama marinade uu saameyn xun ku yeelanayo xuubka xabka ee habka dheef-shiidka. Waxaa intaa dheer, xagashadan waxay sababtaa harraad, taas oo keenta in bararka la sameeyo.
Marka sinjiga qandhadu uu saameyn ku yeesho jidhka, sidaas darteed waa in laga tagaa.
Iyadoo cadaadiska dhiigga oo sareeya iyo jiritaanka wadnaha, sababtoo ah xididka xididdadu waxay xoojisaa wareegga dhiigga.
Marka cudurada gallstone iyo cudurada beerka ee uurka leh.
Xiddiga xididku ma aha mid waxyeello u leh horumarka ilmaha, laakiin mararka qaarkood waxay si xun u saameysaa jidhka hooyada, taas oo keeneysa dhibaatooyin iyo sii xumeynaya xaaladda. Tusaale ahaan sinjiga waa in aan loo isticmaalin inta lagu jiro todobaadyadii ugu dambeeyey ee gestinggaar ahaan barashada preeclampsia. Intaa waxaa dheer, marka la eego in sinjigu uu yahay wakiil dhiig-yaraynaya oo keeni kara dhiigbax, dhakhaatiirta ayaa ku talinaya in ay joojiyaan isticmaalka dhirta marxaladaha dambe.
Haddii haweeneyda uurka leh aysan haysan cudurada kor ku xusan, laakiin waxaa jiray dhacdooyin dhicin, ka dibna waxaa sidoo kale wanaagsan inaad diiddo inaad cuncunto.
Faa'iidooyinka haweenka uurka leh
Wixii hooyooyinka mustaqbalka ah waxay noqon karaan kuwo waxtar leh, maadaama ay awood u leedahay:
si loo xoojiyo difaaca jirka, taas oo ah mid aad u muhiim u ah xilliga carruurnimada;
si tartiib ah u habeeysa cadaadiska dhiiga ee hooseeya;
kicinta dheefshiidka, si wax ku ool ah u saameyn u yeesha mindhicirka, ka hortagga caloosha;
yareeyaa calaamadaha xanuunka lallabo;
Sababtoo ah saameynta tayada, ku siinta warka faraxsan maalin dhan.
Cunto sumaysan oo sun ah
Inta lagu jiro uurka, leh sunta sunta, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in ay dhashaan 1 tsp. rooti cusub oo la jeexay oo ku jira galaas biyo karkaraya oo isticmaal faleebo maalintii oo dhan ee kabaha yaryar. Waxa kale oo aad cabi kartaa shaaha madow ama cagaaran iyada oo lagu daro nus shaaha oo ah shaaha dhulka.
Nacnooyinka xididdada waxaa loo isticmaali karaa sunta sunta. Xaddiga qiyaasta maalintii waa 100-200 mg, oo lagu xisaabiyo 3-4 soo dhaweynta. Qiyaasta ugu fiicani waxay ku qoreeysaa dhakhtarka haweenka uurka leh (gynekologist).
Shaaha tonic ah oo leh sinjibiilku maaha mid ka gaaban guryaha si ay u dejiyaan goobaha lacagta lagu koriyo iyo hooyadaiyo qaar si ka baxsan iyaga. Waxay yareyneysaa madax-xanuun, lalabbo, waxay leedahay saamayn deg deg ah, waxay hagaajisaa caafimaadka. Si aad u sameysid waxaad u baahan tahay:
xididka xididdada (3cm) ku shub hal galaas oo biyo ah qabow;
karkari oo isku kari ilaa 5 daqiiqadood;
cadaadis iyo qabow;
Haddii la rabo, iyo maqnaanshaha xasaasiyadda, waxaad ku dari kartaa liin ama malab si ay u noqoto qoorta.
Waxaad u baahan tahay inaad codsato 1 litir oo ah maraq la qaboojiyey maalintii.
Shaandho fara badan ayaa lagula talinayaa in la isticmaalo wakhtiga cuntada u dhexeysa wakhtiyada cuntada qaybo yaryar. Isticmaalka xaddiga isticmaalka sinjibiinka maalintii ma aha wax ka badan 2g oo ah xidid cusub oo 1kg oo miis ah.
Inaad xiiseyneysid haddii sinjigu uu uur leeyahay, qof dumar ah, marka hore, waa in uu dhageysto jirka, sidoo kale la tasho dhakhtar. Ka dib marka la barbardhigo, dhammaan soo-kabashada iyo darajooyinka cuntada ee muddada uurka waa in la fekeraa oo la isku raacaa. Wadarta waa in ay noqoto mid dhexdhexaad ah.